XOG XIISE BADAN: Kooxaha fasalka soo aaddan usoo baxa CL oo heli doona lacagtii abid ugu badnayd! – Gool FM
Champions League QANI ah!
(Nyon) 24 Maarso 2018 – Dufcadda soo socota ee fasal-ciyaareedka 2018/19 ee Champions League ayaa noqonaya tartankii ugu qaalisanaa abid kaddib markii ay UEFA oo maamusha kubadda cagta Yurub iyo jamciyadda naadiyada Yurub ee ECA ay soo saareen sida dakhliga loo qaybsanayo 3-da fasal ee soo aaddan.
Tartanka CL oo ay ka qayb qaadanayaan 32 kooxood, 16 ka mid ah oo ka dhigan 50% waxay ka imanayaan 4-ta horyaal ee ugu sarreeya Yurub ee Spain, England, Italy iyo Germany, iyadoo uu dakhliga oo markii hore ahaa 2.3 bilyan oo euro uu haatan noqonayo 3.4 bilyan, taasoo ka dhigan koror dhan 47.8%.
Naadiyada ayaa qaybsan doona 1.9 bilyan oo euro, halkii ay awal ka qaybsan jireen 500 milyan ama nus bilyan, waana koror dhan 35.7%, sidoo kale bareemiyooyinka la xiriira natiijada ayaa haatan noqon doona € 600, iyagoo awal ahaa € 348 milyan oo euro.
Warsidaha Gazzetta dello Sport ayaa qoraya in ay kharash dheeraad ah oo dhanka taariikhda koobka ay ku leeyihiin kooxaha qaaday koobka CL, waxaana safkaa ugu horreeya Real Madrid, AC Milan, Bayern, Liverpool iyo Barcelona.
QIIMAHA – Haddii aan eegno sida abaalmarrinada lacageed ee natiijada ku salaysan loo kala helayo, in ay kooxdu Champions usoo baxdo oo qura ayay ku helaysaa 15 milyan oo euro, kaddibna tillaabo kasta kharash baa ugu drasamaya.
Tusaale ahaan, inay guruubkeeda ugu sara marto kaliya waxay ku heleysaa 2.7 milyan oo euro, inay wareegga kale ee 16-ka u gudubto waa 9.5 milyan oo euro, rubuc-dhamaadku waa 10.5 milyan, nus-dhamaadku waa 12 milyan, halka final-ka oo ay gaarto ay jeebka ku shubanayso 15 milyan oo euro, iyadoo haddii ay koobka hanato heleysa 19 milyan oo euro.
FG: Lacagahaasi kuma jiraan kuwa ay kooxdu ka heleeyso iidhehda, sponsors-ka, tigidhada garoonka IWM.
GOOGOOSKA: Sweden vs Chile 1-2 (Sweden oo gurigeeda lagu garaacay)
"Waxaan ku sigtay in aan isku XAARO!" Aqri qiso cajiib ah oo uu Gerard Pique kaga hadlayo arin argagax leh oo ku dhex qabsatay qolka labiska ee Old Trafford iyo sida Roy Keane looga cabsan jiray!